​प्रेमबिना जीवन चल्दैन– छिमी मम्बा, गायिका
Tuesday, 14 Aug, 2018 12:46 PM
गायिका छिमी मम्बा तामाङ आफ्नो नामले भन्दा ‘तामाङ ठिटी’ उपमाले बडी चिनिन्छिन् । तामाङ भाषाका फिल्म निर्माण तथा अभिनयमा समेत सक्रिय रहँदै आएकी छिमी ‘म्हेन्दोमाया’ गीतमा लागि चर्चित छिन् । ‘तामाङ ठिटी’ बोलको ‘म्हेन्दोमाया’ गीतले गायनमा चर्चामा आएकी छिमीले तामाङ भाषाको फिल्म ‘सिङ्ला माने’ निर्माण गरेकी छन् । जुन अहिलेसम्मकै तामाङ फिल्महरुमध्ये उत्कृष्ठ मानिएको छ । दर्जनौ तामाङ र केही नेपाली गीत गाइसकेकी छिमी विशेषगरी आफ्नै मातृभाषामा गाउन रुचाउँछिन् । नेपाली फिल्म निर्माण गर्ने सोचमा रहेकी गायिका तथा फिल्म निर्मात्री छिमीसँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
नयाँ काम के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले एक्सिडेन्ट भएर हात भाँचेर घरमै बसेकी छु । अलि ठीक भएपछि एउटा फिल्मको गीत गाउँदैछु । तर, अझै केही दिन आराम गर्नु पर्ने भएको छ ।
कहाँ, कसरी दुर्घटनामा पर्नुभयो नि ?
चाबहिल चोकमा बाटो क्रश गर्ने बेलामा मोटरसाइकलले हान्यो नि । दशा लागेपछि बाटो हिँड्दा पनि दुर्घटनामा परिँदोरै’छ । करिब एक महिनाअघि दुर्घटनामा परेकी हुँ । त्यसले गर्दा धेरै कामहरु रोकिएका छन् ।
फिल्म बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?
चाँडै सुटिङ सुरु हुँदैछ । तर, त्यो तामाङ भाषाको फिल्म हो । उक्त फिल्ममा मेरो लगानी छैन । गीत मात्र गाउँदैछु ।
नेपाली फिल्म निर्माण गर्ने भन्नुभएको थियो नि ?
नेपाली फिल्म बनाउने हो । तर, केही ढिला हुने भएको छ । साथीहरु देशबाहिर भएकाले ढिलो हुने भएको हो ।
गीतसंगीततिर चाहिँ के हुँदैछ नि ?
फाट्टफुट्ट काम हुँदैछ । त्यही त हो, हात भाँचेर घरबाहिर निस्किँनै भएको थिएन । बल्ल अब सञ्चो हुँदैछु । केही गीतहरु गर्ने सोचमा छु ।
तपाइँ किन तामाङ भाषाकै मात्र बढी गीत गाउनुहुन्छ ?
म चिनिएकै तामाङ भाषाका गीतले हो । पहिलोपटक नै तामाङ संस्कृति बोकेको ‘तामाङ ठिटी’ एल्बम ल्याएँ, मलाई त्यही गीतले चिनायो पनि । अर्को कुरा आफ्नो मातृभाषा र संस्कृति जर्गेनाका लागि पनि तामाङ गीतलाई प्राथमिकता दिएकी हुँ।
तपाइँ ‘म्हेन्दोमाया गायिका’ भनेर चिनिनुहुन्छ । खाश ‘म्हेन्दोमाया’ के हो ?
म्हेन्दोमाया भनेको लोकदोहोरी गीत भनेजस्तै हो । जसले तामाङ समुदायको कला, संस्कृति र संस्कार उजागर गर्छ । म्हेन्दोमाया गीतमा केटा–केटीबीच माया, प्रेमबारे सवाल–जवाफ हुन्छ । विशेषगरी तामाङ समुदायका युवायुवती म्हेन्दोमायामा गीत रमाउँछन् । गाउँघरमा म्हेन्दोमाया गाएर प्रेम गर्ने र विवाह गर्ने चलन समेत छ ।
अहिले तीज गीतको सिजन छ, तपाइँले गाउनु भएन ?
गाउने त मन थियो । तर, के गर्नु टोनले साथ दिएको छैन । मेरो नेपाली टोन राम्रो छैन । अर्को वर्षचाहिँ जसरी तीज गीत गाउने हो ।
अहिले बजारमा आइरहेका तीज गीतलाई कसरी लिनु भएको छ ?
ठिकै लाग्छ । यु–ट्युबमा हेर्छु, सुन्छु । समयअनुसार केही परिवर्तन भएको हो कि जस्तो लाग्छ । केही हद विकृति पनि देख्छु । तीजमा वर्षभरीको पीडा पोखाइन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ । तर, आजभोलीका तीज गीतहरु त खाउँ, नाचौँ, रोमान्स गरौँ भन्ने खालका मात्र आएको देख्छु । यो सायद समयको माग पनि होला, यसमा विकृति पनि छ ।
तपाइँ तीज पर्व मनाउनुहुन्छ कि हुन्न ?
म आफैँ कार्यक्रम गरेर त मनाउँदिनँ । तर, साथीहरुको कार्यक्रममा गएर रमाइलो गर्छु । अरु नाचेको देख्दा नाच्नु मनपर्छ । तर, मलाई आउँदैन । अरु नाचेको हेरेर रमाइलो गर्छु ।
जीवन र प्रेम, यी दुईलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यी दुई एक–अर्काको परिपुरक हुन् । प्रेमविना जीवन चल्दैन र जीवन भएन भने प्रेम हुँदैन ।
तपाइँको लभ कि एरेञ्ज म्यारिज हो ?
मैले लभ म्यारिज गरेकी हुँ, त्यो पनि अन्तरजातीय प्रेम विवाह । करिब डेढ वर्ष लभ परेर विवाह गरेकी हुँ।